लोकसभामा काँग्रेसबाट चुनाव लड्दै सलमान खान ! — Himali Sanchar
लोकसभामा काँग्रेसबाट चुनाव लड्दै सलमान खान !
बलिउडका नायक सलमान खान काँग्रेस पार्टीबाट चुनाव लड्ने सम्भावना देखिएको छ। काँग्रेसले उनलाई टिकट दिने विषय बाहिर सार्वजनिक गरेपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना बढेको हो ।
नयाँ दिल्लीको यमुना एक्सप्रेस राजमार्गमा दुर्घटना, ८ जनाको मृत्यु
बिहानसम्म टिकट बेचिरहेको एयरलाइन्स कम्पनी एकाएक किन भयो बन्द !
राष्ट्रपतिलाई अयोग्य घोषणा गर्नुपर्छ : सैनिक प्रमुख